-Spindle Travel:6-7/8&quot;/175 mm -Spindle Speed:70, 80, 118 RPM -Spindle Feed Speed:Min 0.002 Inch Per Revolution / 0.05 Mm/Rev :Max 0.02 Inch Per Revolution / 0.5 Mn/Rev -Cross Feed Speed:Min 0.002 Inch Per Revolution / 0.05 Mn/Rev :Max 0.01 Inch Per Revolution / 0.025 Mn/Rev -Handwheel Graduations:0.002&quot;/0.05 mm -Motor Diameter:7&quot;/180 mm-15&quot;/381 mm -Motor Thickness:1-7/8&quot;/48 mm -Drum Diameter:6&quot;/152 mm-28:/711 mm -Drum Depth:6-7/8&quot;/175 mm -Motor:1 PH 220 VAC 50/60 Hz :3PH 380 VAC 50/60 Hz
Car Back Seat အိတ် (PreOrder)
ကားနောက်ခန်းမှာ ပစ္စည်းတင်စရာ ရှိစေဖို. Car Back Seat အိတ်လေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဖိုင်ဘာ အသားနဲ. ပြုလုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေ.ကားခုံနောက်မှာ လွယ်ကူစွာ တပ်ဆင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရရှိနိုင်သော အရောင်များ color: black အမဲ pink ပန်း red အနီ gray မီးခိုး Rose နှင်းဆီ red brown နီညို ဈေးနှုန်း - ၂သောင်းကျပ် (PreOrder) Delivery free in Yangon PreOrder ဖြစ်နေသေးတဲ့အတွက် ၂ပတ်စောင့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝယ်လိုအား များလာပါက မကြာခင် Instock ရောင်းပေးမှာပါ။ PreOrder ဖြစ်သော်လည်း မှာယူလိုသူများအနေနဲ. ပိုက်ဆံ ကြိုပေးစရာ မလိုပါ။ ရန်ကုန်မြို.ပြင် = ၂ထောင်ကျပ် နေ.ချင်းအမြန် = ၂ထောင်ကျပ် မြန်မာနိုင်ငံမြို.ကြီးအားလုံး အိမ်အရောက် ၃ထောင်ကျပ် တခြား မြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝယ်ယူလိုပါက 09264686461 (Male) also viber 09784419691 (Male) 09768484878 (Female) also viber ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
Johnson Motorcycle Dream 110
665000 ~ 700000 Kyats
သင်ဆိုင်ကယ်အသစ်တစ်စီးဝယ်ဖို့အတွက် စိတ်ကူးနေပြီလား? တိုးတက်လာတဲ့ခေတ်နဲ့အညီ ယခုအချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံတ၀ှမ်းလုံးရဲ့ ပို့ဆောင်သွားလာရေးကဏ္ဍမှ မော်တော်ဆိုင်ကယ်က အရေးပါနေပါတယ်။ ရုံးသွား၊ ကျောင်းသွား၊ ဈေးသွားဖို့နဲ့ ဟိုနားဒီနားသွားရင်တောင် ဆိုင်ကယ်လေးတစ်စီးရှိမှ အဆင်ပြေလွယ်ကူမှာ အသေအချာပါပဲ။ အဲ့ဒီလိုအဆင်ပြေလွယ်ကူစေဖို့အတွက် သင်မော်တော်ဆိုင်ကယ်အသစ် ၀ယ်ယူဖို့လိုအပ်နေပြီဆိုရင်တော့ ဈေးနှုန်းတသင့်တင့်ပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့ Johnson (ဂျွန်စန်) မော်တော်ဆိုင်ကယ်လေးတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး ISO လက်မှတ်ရ တရုတ်ပြည်မစက်ရုံမှ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်လို့ ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါတယ်။ Model တစ်ခုချင်းစီကို ပုံလေးတွေနဲ့ဖော်ပြထားပြီး လက်ရှိဈေးနှုန်းလေးတွေကိုပါ တွဲပြီးဖ်ာပြပေးထားပါတယ်။ ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိနိုင်လို့ ၀ယ်ယူတော့မယ်ဆိုရင် နီးစပ်ရာအနီးဆုံး အရောင်းဆိုင်၊ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်တွေကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းဖို့မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်။ Johnson (ဂျွန်စန်) ဆိုင်ကယ်တွေကို ၀ယ်ယူချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် လေ့လာလိုလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် နီးစပ်ရာအရောင်းဆိုင်၊ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်တွေမှာ အသေးစိတ်လေ့လာလို့ရပါတယ်လို့ သတင်းကောင်းပါးပါရစေ။
-Motor Diameter:4&quot;/102mm-24,7610mm -Motor Thickness:2.85&quot;/73 mm -Drum Diameter:6&quot;/152mm-28,7711mm -Drum Depth:9&quot;/229mm -Flywheel Diameter:6n/152mm-24&#039;7611 mm -Spindle Weight Capacity(Standard 1&quot; Arbor):150lbs/68kgs -Spindle Speed:70-320 RPM -Feed Rates - Rotor and Drum:0&quot;/0mm-0.026,,/0.66mm -Feed Rate Per Minute:2.54&quot;/64.5 mm -Electrical Reauirement:110 V/220V/380 V 50/60 Hz
* Double Locking Ratchet Action * Large foot base for added support
1100 ~ 1500 $
Suitable for mining use CO2 /MAG at the industrial industry of welding machine steel structure、automobile parts、car parts、power construction、ship installation.
COSIN CYL06 တံဆိပ်လမ်းကြိတ်စက် (smooth wheel road roller) သည် အဓိကအားဖြင့် ကတ္တရာ၊ သဲမြေဆီလွှာနှင့်ကျောက်စရစ်များပေါ်သို့ ဖိရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။ ထို့အပြင်မြက်ခင်းများ မျက်နှာပြင်ညှိဖို့အတွက်များလဲ အသုံးပြုကြသည်။ CYL06 ၏အင်္ဂါရပ် 1. ဟွန်ဒါအင်ဂျင်၊ သာလွန်ကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် စက်ကိုစတင်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူခြင်း 2. သေးငယ်တဲ့ဧရိယာအတွင်းမှာပါ အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ 3. ဟိုက်ဒရောလစ်ဒရိုက်စနစ်နှင့် Stepless အမြန်နှုန်း၊ Direction ပြောင်းရတာလွယ်ကူခြင်း။ 4.သယ်ယူရလွယ်ကူပြီး handrail ၏အမြင့်ယန္တရားထိန်းညှိခြင်း။ 5. NSK တည်နေရာ နှင့် MITSUBISHI V-ခါးပတ်။ 6. သံချေးမတက်၊ လှပသောဒီဇိုင်း။ လူကြီးမင်းတို့မှာယူသော စက်ပစ္စည်းအားလုံးကို ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် အရောက်ပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။ ၀ယ်ယူပြီးသော စက်ပစ္စည်းအားလုံးကို Sales after Services စနစ်ဖြင့် လူကြီးမင်းတို့ စိတ်တိုင်းကျ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
Jack Stand6Ton Double Locking
This Kohler Courage Engine brings professional-grade features to the consumer. Overhead valve design provides power with better fuel efficiency and cleaner emissions. The cast iron cylinder bore and steel forged crankshaft add protection under load, extending engine life. Displacement (cu. in.): 12, Max. RPM: 3,600, Low Oil Alert: Yes, Start Type: Recoil, Throttle Control: On engine, Bearing Type: Ball, Shaft Length (in.):27/16, Shaft Diameter (in.): 3/4, Auto Compression Release: Yes, Cylinder Bore: 2.7, Shaft Keyway (in.): 3/16, PTO Height (in.): 4.173, Bolt Circle (in.):35/8, Crankshaft: Steel forged and hardened, Cooling System: Air, Mounting Base L x W (in.): 6.378 x 3.169, Shaft Output: CCW, Fuel Type: Gasoline, EPA/CARB Approval (California Air Resource Board): Yes, Gear Reduction: No, Ignition System: Electronic, Lubrication System: Splash, Bore x Stroke (in.): 2.7 x 2.1, Cylinders (qty.): 1, Governor System: Mechanical, Muffler Included: Yes, Choke Control: Yes, Compression Ratio: 8.5 : 1, Fuel Pump: No, Carburetor: Bowl drain, Low Oil Shutdown: Yes, Fuel Tank: Metal, Engine Type: Horizontal air-cooled, Fuel Filter: Yes, Fuel Tank Capacity (qt.): 3.8, Shaft End Tapped (Diameter (in.)/Threads per inch): 5/16-24 UNF, Air Cleaner Type: Dual element, Dimensions L x W x H (in.): 12.3 x 14.3 x 13.5, Shaft Rotation (From PTO Shaft Side): CCW, Torque (ft./lbs.): 8.5 @ 2,800, Oil Capacity (qt.): 0.63, Engine Displacement (cc): 196, Application: Aerator, dethat
7 Drawer Tool Box with Tools
*7Drawer Tools Box with Tools
John Deere 8800A TerrainCut မြက်ဖြတ်စက် ပန်းခြံနဲ့ ဂေါက်ကွင်းတွေမှာ အသုံးပြုဖို့ အလွန်သင့်တော်တဲ့ John Deere မြက်ဖြတ်စက်ပါ။ အတိုင်းအတာ အတိအကျဖြင့် မြက်ဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့အပြင် မောင်းနှင်အသုံးပြုတဲ့အခါမှာလည်း လွယ်ကူစွာပဲ မောင်းနှင်နိုင်ပါတယ်။ အင်ဂျင် ပါဝါကတော့ 49.2 HP (36.2 kW) ဖြစ်ပါတယ်။ အကျယ် ၁၀၀ လက်မ နဲ့ အမြင့် 1.125 လက်မ အထိ ဖြတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Hydraulic power steering ပါရှိပြီးတော့ တစ်နာရီလျှင် 12.8 km ထိဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့အပြင် hydrostatic pump တွေပါရှိတာမို့လို့ လူကြီးမင်းတို့ လုပ်ငန်းအတွက် အချိန်ကုန်သက်သာပြီး စိတ်ကျေနပ်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ Mower ပဲဖြစ်ပါတယ်။
John Deere 8700A PrecisionCut
John Deere 8700A PrecisionCut မြက်ဖြတ်စက် ပန်းခြံနဲ့ ဂေါက်ကွင်းတွေမှာ အသုံးပြုဖို့ အလွန်သင့်တော်တဲ့ John Deere မြက်ဖြတ်စက်ပါ။ အတိုင်းအတာ အတိအကျဖြင့် မြက်ဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့အပြင် မောင်းနှင်အသုံးပြုတဲ့အခါမှာလည်း လွယ်ကူစွာပဲ မောင်းနှင်နိုင်ပါတယ်။ အင်ဂျင် ပါဝါကတော့ 49.2 HP (36.2 kW) ဖြစ်ပါတယ်။ အကျယ် ၁၀၀ လက်မ နဲ့ အမြင့် 1.125 လက်မ အထိ ဖြတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Hydraulic power steering ပါရှိပြီးတော့ တစ်နာရီလျှင် 12.8 km ထိဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့အပြင် hydrostatic pump တွေပါရှိတာမို့လို့ လူကြီးမင်းတို့ လုပ်ငန်းအတွက် အချိန်ကုန်သက်သာပြီး စိတ်ကျေနပ်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ Mower ပဲဖြစ်ပါတယ်။
John Deere 8000A E-cut hybrid
John Deere 8000A E-cut hybrid မြက်ဖြတ်စက် ပန်းခြံနဲ့ ဂေါက်ကွင်းတွေမှာ အသုံးပြုဖို့ အလွန်သင့်တော်တဲ့ John Deere မြက်ဖြတ်စက်ပါ။ အတိုင်းအတာ အတိအကျဖြင့် မြက်ဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့အပြင် မောင်းနှင်အသုံးပြုတဲ့အခါမှာလည်း လွယ်ကူစွာပဲ မောင်းနှင်နိုင်ပါတယ်။ အင်ဂျင် ပါဝါကတော့37.1 HP (27.7 kW) ဖြစ်ပါတယ်။ အကျယ် ၁၀၀ လက်မ နဲ့ အမြင် 20-in(203) လက်မ အထိ ဖြတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Hydraulic power steering ပါရှိပြီးတော့ တစ်နာရီလျှင် 10 km ထိဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့အပြင် hydrostatic pump တွေပါရှိတာမို့လို့ လူကြီးမင်းတို့ လုပ်ငန်းအတွက် အချိန်ကုန်သက်သာပြီး စိတ်ကျေနပ်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ Mower ပဲဖြစ်ပါတယ်။